Archive du 20161228
Governemanta Hodakana ny PM Mahafaly Olivier ?
Mangingina ny tontolo politika amin�izao vanim-potoanan�ny fety izao.
Depiote Randrianasolo Nicolas Nataon�ny ladoany lavanty ny fiarany
Fiara Mercedes 600SEL, mitovy amin�ireny fitondrana filoham-pirenena ireny, nentin�ny sambo Hoegh Treasur avy any Eoropa ary tonga tao amin�ny seranan-tsambon�i Toamasina ny 4 aprily 2014 ity nataon�ny ladoany lavanty ny herinandro teo ity rehefa ela nipetrahana tao fa tsy voaloan�ny tompony ny haban-tseranana sy ny saran�ny fipetrahany tao efa roa taona mahery izay.
Afaka i Augustin Andriamananoro Taraiky i Alain Ramaroson
Afaka ihany ! Nivoaka omaly ny didim-pitsarana ka afaka madiodio sy noho ny fisalasalana i Augustin Andriamananoro tamin'ny vesatra miisa telo nanenjehana azy.
Fiainan�antoko Feno 60 taona anio ny PSD
28 desambra 1956 - 28 desambra 2016 : feno 60 taona katroka ny antoko PSD (Parti Social-D�mocrate)
Arahabaina aloha ry Jean fa naman�ny afa-bela fa tsy nataon-dRaf�rsa sy ny ekipany in-droa nahita ny maizina toy ny tain�omby natsentsin-davabary a !
Toetr�andro Hanomboka hisesy ny rotsak�orana
Hirotsaka ny orana mandritry ny fetin�ny faran�ny taona sy ny taom-baovao ho an�ny eto an-drenivohitra, raha ny tomban�ny Foibe mpamantatra ny toetr�andro.
Asaramanitra eny Iavoloha Hotambazana 10% ny mpiasam-panjakana ?
Hotanterahina eny amin�ny lapam-panjakana Iavoloha amin�ny zoma 6 janoary 2017 ny Asaramanitra, lanonana fifampiarahaban�ny Andrim-panjakana noho ny taona vaovao.
Minisiteran�ny fiarovam-pirenena Hamboly hazo faramparany
Mbola hamboly hazo faramparany eny Tsimahabeomby Imerintsiatosika eny ry zareo avy eo anivon�ny minisiteran�ny fiarovam-pirenena, etsy Ampahibe, ny 29 desambra izao.
Rozette Lucienne Im-pito niteraka, kambana ny roa
Harena tokoa ny zaza ho an�i Soavindrazana Rozette Lucienne, vehivavy 40 taona, mponina avy any Ambohimalaza,
Tomban�ezaka sa mampifezaka ?
Telo andro sisa dia higadona ny andro hanaovam-beloma ny taona 2016. Samy nanana ny fahitany azy mikasika azy iny ny isam-batan�olona.